I-Trapiche amethyst luhlobo olunqabileyo lwe-quartz emfusa - ukumiswa kwemibala - ividiyo
tags neametiste, Trapiche
Thenga i-tracksicheiche yendalo kwivenkile yethu
I-Trapiche amethyst (okanye i-tracksiche-efana ne-amethyst) luhlobo olunqabileyo lwe-quartz emfusa enemibala ekhethekileyo yemibala. Kulula ukuchonga
Iigugu ze-tracksiche eziyinyani zinokuphakanyiswa phakathi kwamacandelo okukhula. Nangona kunjalo, ukulungiswa kwemibala elula okanye ukukhula kokufakwa ngaphakathi kwikristale kunokwenza iipatheni "ezinje" zokoqobo kwezinye iigrem. Oku kuthetha ukuba i-crystal yezi zixhobo zixabisekileyo ezinje nge-geariche ziyaqhubeka, ngelixa inyani yokwenyani yamaminerali iqhekezwa kumacandelo akhula ngokukodwa.
Okwangoku, ezi zixabisekileyo zinolungelelwano olothusayo olunxulunyaniswa neegugu ze-tracksiche kwaye zinqabile kakhulu. Izimbiwa ezifanayo ezenza i-tracksiches yinyani zinokuba ngumda we-tracksiche-like color color okanye, kwimeko yecquartz ye-quartz, umtsalane womzekelo obonakalayo. Ukongeza, iidayimani kunye ne-pezzottaite inokukhula ibe ziigrowsiche-ezifana neegrem.
Iiminerali ezineempawu ezingalingani zokulinganisa kwekristale nazo zinokwenza iigrailer-ezifana neegrem. Umzekelo, i-trapiche-like rhodochrosite yenzeka eArgentina.
I-amethyst yendalo ngumbala onsomi ombala owahlukileyo wekristali quartz. Ikweleta umbala wayo o-violet ngenxa yendalo yokucoceka kwesinyithi. Ngamanye amaxesha ngokudibeneyo nokutshintsha kwezinto ezingcolileyo. Ubukho bezinto ezilandelwayo zikhokelela ekungeneni kwe-crystal lattice. Kwakhona, ubunzima be-mineral bufana ne-quartz. Ke kufanelekile ukuba kusetyenziswe ubucwebe ngexabiso elinokufikeleleka.
Amethyst gemstone yenzeka kwii-hues eziphambili. Ukusuka kwibala elibomvu elipinki ukuya kumfusa. Ingabonakalisa ii-hues ezizezesibini okanye ezibini ezisekondari: zibomvu kwaye ziblowu. ISiberia, kunye neSri Lanka, iBrazil neAsia yimithombo yezona ntlobo intle. Isizalo esisezantsi lelona ligama lifanelekileyo. Inombala wepreyini oyiprayimari ojikeleze i-75 / 80%, ene-15 / 20% eluhlaza okwesibhakabhaka. Kuxhomekeka kumthombo wokukhanya.
Trapiche amethyst intsingiselo
UTrapiche Amethyst kuthiwa uqinisa i-endocrine kunye nezifo zomzimba. Ngenxa yokwenziwa kwekristale ekhethekileyo, kuthiwa kuphucula ukusebenza kwengqondo, ukwandisa uxinzelelo, kunye nokwenza amandla kumntu ozinxibileyo. Eli litye likwabizwa ngokuba likhulisa ubuchule be-psychic, lilungile ukuhambisa amandla ngexesha lokucamngca. Nokuba yeyiphi na iinkolelo zakho, ngamana ungayonwabela iTrapiche Amethyst yakho.
tags neametiste, Cacoxenite, Goethite
tags ilitye elinqabileyo elibomvu, Trapiche
tags neametiste, Quartz